I-Brown Sugar Bacon Egoqiwe Intuthu - Ungadliwa
ngenza kanjani uphizi onokhilimu
ukhonza ini nenkukhu piccata
akukho bhaka wamantongomane abhakiwe nge-vanilla pudding
ikhipha kanjani imbiza esheshayo ngokwemvelo
I-Brown Sugar Bacon Egoqiwe Intuthu
Lezi zibhemi ezisongwe ngoshukela onsundu zenza isikhalazo esihle! Kulula ukuzenza futhi zingenziwa kalula ngaphambi kwesikhathi futhi zibanda kahle!
Lezi zibhemi ezigoqwe ngentuthu enoshukela onsundu zimnandi kabi! Ukungeza ukusikisela kwepelepele ye-cayenne kubenza bamangalisa ngokwengeziwe!
Umama wami wenzele izingane zami ngolunye usuku ngenkathi elapha egcina ingane… futhi BABATHANDA! Ngakho-ke njengoba enguGogo, wenza isikhwama esikhulu sazo sonke futhi wasiqandisa ngathi ukuze singene nje kuhhavini lapho befuna okumbalwa! Ungakhathazeki nokho, izingane ezinkulu ziyazithanda lezi futhi… ziphelele ngohlamvu lwesinaphi nobhiya obubandayo ngosuku lomdlalo!
Yep, ungenza lezi bacon ezisongelwe izithambisi ngaphambi kwesikhathi bese uziqhuma efrijini. Bhaka kusuka eqandisini lapho izivakashi zivela emnyango wakho (vele ungeze imizuzu engu-5 eyengeziwe ngesikhathi sokupheka)!
* Ukukhethwa kwamazinyo * Intuthu * Ubhekeni * Ucwecwe *
I-Bacon Brown Sugar Smokies
Isikhathi sokulungiselela10 imizuzu Isikhathi Sokuphekaamashumi amabili imizuzu Isikhathi Esiphelele30 imizuzu Izinkonzo12 izinsizakalo UmbhaliUHolly NilssonLezi zibhemi ezisongwe ngoshukela onsundu zenza isikhalazo esihle! Kulula ukuzenza futhi zingenziwa kalula ngaphambi kwesikhathi futhi zibanda kahle! Phrinta Phina
▢1 Iphakheji ye-Bacon
▢1 Iphakheji yama-Mini Smokies
▢½ inkomishi Ushukela onsundu
▢¼ isipuni upelepele we-cayenne noma ukunambitha
Hlangisa i-ovini iye ku-425 ° F. Khombisa ipani lokubhaka nge-foil.
Sika i-Bacon ibe yizintathu. Songa ucezu olulodwa lwebhekoni ezungeze intuthu ngayinye encane bese uvikelekile ngomuthi wokuxubha.
Hlanganisa upelepele we-cayenne noshukela onsundu bese ugoqa intuthu ngayinye kulengxube. (Qaphela: Zingaba yiqhwa kuleli phuzu)
Beka amapani alungisiwe bese ubhake imizuzu eyi-10.
Flip smokies bese upheka imizuzu eyishumi eyengeziwe noma kuze kube yilapho ubhekeni luyi-crispy. (Faka eminye imizuzu emi-5 uma ubhaka kusuka efriziwe).
QAPHELA: Ungayihlanganisi ushukela onsundu kanye nentuthu esentanyeni esephepheni eligcwele ulayini ngoba ushukela okweqile onsundu ungasha. Gcoba ushukela onsundu kuma-smokies ngaphambi kokuwafaka epanini.
Amakholori:43,Amakhabhohayidrethi:9g,Cholesterol:1mg,I-Sodium:22mg,Potassium:ishumi nanhlanumg,Ushukela:8g,Uvithamini A:ishumi nanhlanuIU,I-calcium:8mg,Insimbi:0.1mg
Igama elingukhiyeubhekeni lusongwe intuthu InkamboIsikhangisi KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .
* Inkalankala Rangoon * Ama-Rolls we-Popper Mini Egg * Ukhukhamba othosiwe *